विच्छेदपछिको सम्बन्ध ! « Nepali Digital Newspaper
विच्छेदपछिको सम्बन्ध !
७ माघ २०७७, बुधबार ०६:०२
र, उनी फोन गर्छन् । उताबाट आवाज आउँछ- ‘ए.. हजुर ! प्रेसरको दबाइ लिइरहनुभएको छ नि ?’
यो शब्द सुनेर उनी झस्किन्छन् । आवाज चिनेको जस्तो पनि लाग्छ, जवाफ फर्काउँछन–‘तपाईं को हो ? फेरि मलाई प्रेसर छ या छैन तपाईंलाई जानकारी कसरी ?’
जवाफ आउँछ- ‘म उही हुँ… हजुरसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी छुट्टै बसेकी व्यक्ति ।’